4 Qodob oo ay heshiis ku gareen Madaxda DFS & D.Gobaleedyada kushirsan Dhuusa-Mareeb
July 22, 2020 NEWS 4
MUQDISHO(P-TIMES)- Kulanka hoggaamiyayaasha Siyaasadda Soomaaliya ee kasocda magaalada DhuusaMarreeb ayaa lasoo gabagabeyn doono caawa saqda dhexe ilaa aroornimada hore ee Jimcaha.
Waxaana xogaha u dambeeya ay cadeynayaan in heshiis ay dhinacyadu ku wada yihiin.
1. In Doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo aysana jirin wax mudo kororsi ah oo loo sameynayo Hay’addaha Dastuuriga ah ee dalka.
2. In 15 maalmood ka dib lays-kugu soo laabto kulan wada jir ah oo ay Hoggaamiyayaashu leeyihiin.
3. In la helo lana qabto doorasho Heshiis lagu yahay dhammaan dhinacyada oo dhan.
4. Guddi gaar ah ayaa dood iyo falanqeyn ku sameynaya mudadaas doorashada laqabanayo, ee dibka loogu celinayo baarlamaanka.
Afartan qodob ayay lagu shaacin doonaa warmurtiyeed wadajir ah, sida ay sheegayaan masuuliyiin katirsan wafuuda DFS iyo Maamul gobaleedyada ee kusugan magaalada Dhuusa-Marreeb, kuwaas oo qeyb ka ah wada xaajoodyadii u dambeeyey.
awalba shirkan,wax badan laga ma filayn.
waa marka horee madaxda maamul goboleedyada,sida dastuurka dowlada federaalka ah,ku qoran,waxba awood u ma laha,in ay iyago go’aan ka gaaraan,arimaha la xiriira,doorasha baarlamaanka iyo tan madaxwaynaha dowlada federaalka.
doorasha baarlamaanka iyo mida madaxwaynaha waxaa sharciyan iska leh in uu go’aan ka gaaro,golaha baaralmaanka Soomaaliya.
Waa in aan dastuurka iyo nidaamka dowladnimo aysan noqoon in hadba dad aan wax shaqo ah ku lahayn,ay iskood iso magacaabaan,madaxda maamul goboleedka waxay leeyihiin oo qura la tashe oo ah,mid tixgelin oo qura ah.
Waa in sharciya qaanada iyo xildhibaanada aqalka baarlamaanka aysan,ka aamusin,in madaxda maamul goboleedko ay ka talaabsadaan,awoodaha u yaal qaranka Soomaaliya ee ku qeexan,dastuurka dowlada federaalka ah.
Dawladu waqtiga waa dhamaaday doorashada ay wadato waa wax an soconeyn . Golaha baarlamaanka waa calool u shaqeystayaal sanduuqo ku jira December 26 2020 waa na daayen . Musuqmaasuqii villa SOMALIA xal uma aha dalka dalka iyo dadkana waxaa ka masuul ah maddaxda goboladda kuwaas baa matalaata leh. FEBRUARY 8 FARMAAJO haddii DOORASHO dhici waydo villa SOMALIA tareeso loogu geynayaa mr FARMAAJO
Beenta kolba meel isku qaad, mardhowyd maxaad lahayd, afkaaga iyo dhagahaagu isma maqlaan, puntlandtimes waxaad noqoteen websiteka ugu liita uguna tayo xun webebka soomalida
Bal eeg hadaa waxaad lasoo shir tagtay? Horta soo baro nidaamka Federaalka Soomaaliya kolkaa kadib hadal laakiin maba tihid qof ay xataa ABC u bilaaban tahay ! Waxaad is leedahay Farmaajo difaac hadana garanmaysid sidii aad ku difaaci lahayd ! What an idiot you are!!!
Bal cid tiri Dawlad Goboleedyada ayaa go’aan ka gaaraya ama awood u leh Doorashada Baarlamaanka iyo tan madaxweynaha inoo sheeg? Waa uun malaa awaal iyo waxaad jeceshahay waxaad halkaan ku qortay. Hadii uu Farmaajo awood u leeyahay asaga iyo Baarlamaan ku sheega bal waakaas ee doorasho hanoo qabtaan! Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federalism ka ah waqtiga doorashadana waa in wadanka ka dhacaa doorasho laysla ogol yahay ee maaha mida uu Farmaajo jecel yahay ee mudo kororsiga ah inaad sharci nooga dhigto.